Rụpụta | October 2021
Isi > Rụpụta
Jordan spieth mgbatị ahụ
Jordan spieth mgbatị - otu esi edozi
Ego ole ka Jordan Spieth's Caddy na-eme otu afọ? Naanị n'ihi na ụfọdụ ndị egwuregwu adịghị ọnụ ala ma na-agbanwe akpa n'akpa uwe, ọ pụtaghị na ndị caddies niile na-ebi na nickel na oge. Na 2015, onye mmeri US Open, Jordan Spieth, nwetara ego dị nde $ 1.8 dị mma. Onye nna ya Michael Greller tinyere $ 180,000 maka ọrụ ya na asọmpi ahụ.
Mgbatị Watts - olee otu anyị si edozi
Ole watts bụ ezigbo mgbatị ahụ? N'ikwu okwu n'ozuzu, onye na-agba ịnyịnya ígwè na-amalite nwere ike ịdị ihe dịka 75100 watts na mgbatị elekere 1. Onye ruru eru ga-enwe ihe karịrị 100 watts, ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike iru 400 watts kwa elekere.
Mgbatị ahụ - ịza ajụjụ ndị a
Ọ dị mma ịme mgbatị? Me iji mmanya na-egbu egbu ga-ekwe omume, ọ bụrụ na ị dị jụụ n'ike, otu onye na-enye ọzụzụ kwuru. O nwedịrị ike ime ka obi dịtụ gị mma. Alcoholụbiga mmanya ókè na imeru ihe n'ókè adịghị ka ọ ga-egbochi ihe mgbaru ọsọ ahụike gị dum, nnyocha gosiri.
mgbagwoju carbs post mgbatị
Mgbanwe carbs dị mgbagwoju anya na - arụ ọrụ - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ụgbọ ala kacha mma ị ga-eri mgbe mgbatị ahụ gasịrị? Nri uto, nkpuru osisi, na nkpuru osisi nwere ike buru ezigbo nri di nma, dika quinoa. Quinoa enweghị gluten, nkewa dịka pseudocereal, ma na -ewekarị nri dị ka ọka. Ọ dị elu na eriri ma baa ọgaranya na protein, yana iko 1 na-enye 8,14 g.
ájá olulu mgbatị
Mgbatị ájá ájá - olee otu ị si ekpebi
Kedu ihe mgbatị ájá na-eme? Aja bu ezigbo ihe omumu omumu iji meziwanye ngwa ngwa na agility. Ọ na - enye nguzogide nke na - egbochi mọzụlụ gị, na - enyere gị aka ịme gị ngwa ngwa ma bụrụ ihe mgbawa. Gbanwegharị mgbe niile n'okpuru ụkwụ gị na-eme ka uru ahụ dị obere nke na-eme ka nguzozi ma belata ihe egwu nke mmerụ ahụ. 29. 2012.
atụmatụ mgbatị oyi
Atụmatụ mgbatị oge oyi - esi edozi
Kedu mmega ahụ kachasị mma n'oge oyi? 'Were nkeji ise ruo 10 ma mee mmega ahụ dị ala dị ka ịgba ọsọ na ebe ma ọ bụ na-eme ka jacks,' ọ na-adụ ọdụ. N'ụzọ dị otú ahụ, mgbe ị pụtara n'èzí, ị ga-anụrịrị ọkụ. ' Ejiji kwesịrị ekwesị nwekwara ike inyere gị aka. Yiri akwa iji nwee ike kpachapu ha ka okpomoku ahu gi na abawanye.16.01.2004
ugboro abụọ n'izu mgbatị
Korụ ọrụ ugboro abụọ n'izu - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Ọ dị mma ịme mgbatị ahụ ugboro abụọ n'izu? Mana Mans kwuru na ọzụzụ naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu agaghị enye gị ihe karịrị ogo mgbatị ahụ. Shouldkwesịrị ịzụ ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahụike na ahụike gị n'oge kwesịrị ekwesị, ma nọrọkwa na ahụike, Mans na-akọwa.
Mgbatị ahụ ike na - arụ ọrụ - nkọwa zuru ezu
Kedu ka ị si azụ mọzụlụ stabilizer? Zọ kachasị mma iji wusie ike gị bụ iji nwayọọ nwayọọ na-emega ahụ, na-eji obere ibu ma na-eme ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro. Ọzọkwa, ọ dị oke mkpa na ị ga-elekwasị anya na nhazi na nhazi, nke mere na ị ga-eji nwayọ na-eme ihe omume.
enweghị ike ihi ụra mgbe mgbatị gasịrị
Enweghi ike ihi ụra mgbe mgbatị ahụ - otu esi edozi ya
Gini mere na agaghị m ehi ụra mgbe mgbatị gachara? Ọtụtụ mmadụ na-eche na adrenaline ewepụtara n'oge arụ ọrụ siri ike na-atụgharị ụbụrụ ha na-emebiga ihe ókè, na-eme ka o sie ike ihi ụra mgbe mgbatị ha gasịrị. Ma n’ezie, ọ bụrụ na ị bụ, gbalịsie ike na-eme mgbatị gị n’ụtụtụ ma ọ bụ n’ehihie.
ihe ị ga-a drinkụ tupu mgbatị
Ihe ị ga-a drinkụ tupu mgbatị - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Gịnị bụ ihe ọ bestụ drinkụ kacha mma ị drinkụ tupu mgbatị? Mmiri dị mkpa maka ịrụ ọrụ. A na-atụ aro ka ị waterụọ mmiri na ihe ọ soụ soụ nke nwere sodium tupu emega ahụ iji kwalite nguzozi mmiri na igbochi oke mmiri mmiri.
Omume mgbatị - azịza bara uru
Kedu ezigbo omume mmega ahụ? Ezigbo ihe mgbaru ọsọ maka ọtụtụ mmadụ bụ ịrụ ọrụ iji megharịa 5 ugboro kwa izu maka minit 30 ruo 60 n'otu oge. Ọ bụrụ na ọ dị ihe dị ka minit 30 ruo 60 n'otu oge ọ na-esiri gị ike itinye oge ị ga-eji na-arụ ọrụ nke ọma, i nwere ike kewaa oge i ji emega ahụ́. 2020.